इकोनोमिक अपडेट : February 2017
नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दै
काठमाडौंः सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्दा नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दो छ । कमजोर प्रशासनिक क्षमता, समय अनुसारका ऐनकानुनको अभाव र नीति निर्माताहरूमा समेत विषयवस्तुबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको मुद्दा ओझेलमा परेको हो ।
जसका कारण २० वर्षदेखिका २ हजारभन्दा बढी उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन भने उजुरीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) सम्बन्धमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
उजुरी पर्नेमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखाना छन् । यस्तै, गार्मेन्ट उद्योगदेखि बिस्कुट, गुट्खा, चिया, कफीलगायत उत्पादनशील वस्तुहरूविरुद्ध बढी उजुरी आउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नै बढ्न सकेन जसका कारण २० वर्षदेखिका उजुरीको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।”
उनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे चेतनाको अभावले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए । उनले भने, “यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो, यसबारे हामो सरकार, राजनीतिक दल, आम जनता, निजी क्षेत्र कसैले चासो दिएका छैनन् ।”
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एक ठाउँमा दर्ता भएको व्यापार चिन्हको प्रयोग विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कम्पनी, संस्था वा संघसंगठनले सामान्यतया व्यापार चिन्हको लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म कुनै कम्पनी वा संघसंस्थाबाट व्यापार चिन्हको दावी नगरेको अवस्थामा आवेदन दिएको मितिले चार महिनासम्म व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
एक व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले प्रयोग गरेको व्यापार चिन्हको चोरी भएको वा कपि भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले आवेदन दिएको मितिले ९० दिनसम्म दावी विरोध गर्नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालमा टे«डमार्कबारेको चेतना अत्यन्तै न्यून रहेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन् । “हामी उत्पादनमुखी नहुनुका पछाडि हामीले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन सकेनौं,” उनी भन्छन्, “यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।”
व्यापार चिन्हको प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, व्यापार बढ्ने र ब्राण्ड स्थापित गर्न सहज हुने भएकोले नेपालमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा चेतना नहँुदा यो विषय ओझेलमा परेको उनको भनाई छ ।
“समयसापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने थियो, हामीकहाँ यो बिषयमा चेतनाको विकास हुन नसक्दा नेपालले लाभ लिन सकेन,” उनले भने । बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा पटकपटक अध्ययन अनुसन्धान भए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ओझेलमा परेको छ ।
नेपालमा २०२२ मा आएको पेटेन्ट डिजाइन तथा टे«डमार्क ऐन मात्रै प्रचलनमा छ । हाल उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग बिभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापार चिन्ह) पेटेन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला) को चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ ।
संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपी अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययनले बौद्धिक बिषयका चिन्हहरू वितरण गर्दै आएको छ ।
उद्योग बिभागका आइपी शाखा प्रमुख दिपक घिमिरे भन्छन्, “पछिल्लो समयमा ट्रेडमार्कबिरुद्ध उजुरी बढ्दो छ, व्यवस्थापनको कार्य आरम्भ भएकोले यो सकिएलगत्तै उजुरीको एकिन संख्या आउने छ ।”
उनले एकिकृत बौद्धिक सम्पत्तिकौ मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकोले नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताए । “अहिलेसम्म ४ सय उजुरी परेको तथ्यांक विभागसँग छ तर धेरै पुराना उजुरी भएकोले फस्र्यौैट गर्न पनि विभागलाई हम्मेहम्मे छ,” उनले भने ।
नेपालले औद्यिोगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई बि.स. १९९४ देखि मान्यता दिदै आएको भएपनि सन् २००४ देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को सदस्यता लिएर विश्व बजारमा प्रवेश गरेको छ ।
५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाए
काठमाडौः चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनमार्फत विवरण बुझाइएको यो नै सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघको अन्त्यसम्ममा १ लाख ६५ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । “चालू आवको पुस मसान्तसम्म ४९ हजार ४ सय ३२ कम्पनीले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाएका छन्,” कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, “अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।”
कार्यालयका अनुसार गत आवमा ३९ हजार २ सय ४० कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए । बढ्दो कम्पनी दर्ताको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहयोगमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन संस्करण सुरु गरेको हो ।
कम्पनी दर्ताको चाप उल्लेख्य भए पनि अध्यावधिक गर्ने कम्पनी भने न्यून रहेको स्वयं अधिकारीहरू नै बताउँछन् । “एक तिहाइ कम्पनी मात्रै अद्यावधिक भएको देखिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि एक लाख कम्पनीले विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।”
अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि कार्यालयमा पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको पहुँुच हुनेहरूले अनलाइनबाटै नाम जुराउनेदेखि विभिन्न फाइल पेश गर्नेसम्मका काम गर्छन् । सबै विवरण नआउँदासम्म नवीकरण हुन नसकेपछि र जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कार्यालयका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत संसारजंग देवान भन्छन्, “अनलाइन संस्करण सुरु भएपछि हामीले दिने सेवा र सेवाग्राहीको सुबिधामा समेत वृद्धि भएको छ, अनलाइनमा हामीले बिस्तारै बामे सर्दैछौं ।” उनले दर्ताको तुलनामा अभिलेख राख्ने कम्पनीहरू पनि न्यून रहेको पनि बताए ।
अनलाइन विवरण बुझाउने कम्पनी संख्या
०७० /०७१ ३३३१४
०७२ /०७३ ४९४३२
स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
अध्ययनअनुसार कम्पनी खोलिसकेपछि एउटा कम्पनीबाट कम्तिमा पनि ५ जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । कम्पनी ऐनअनुसार सवै विवरण बुझाएपछि मात्रै खारेजी वा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
धेरै कम्पनीहरू व्यावसायिक प्रयोजनभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापका लागि खुल्ने प्रचलन बढ्दो देखिएको रजिष्ट्रार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनी खोलिसकेपछि बन्द नगर्दासम्म हरेक वर्षको जरिवाना बढ्दै जान्छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एकप्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जरिवानमा तीन महिनासम्म २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई १ हजार रुपैयाँ, १ करोडसम्मको कम्पनीलाई २ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । कम्पनी नवीकरण वा वार्षिक अद्यावधिक गर्ने समय पुस मसान्तलाई लिने गरिएको छ ।
शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने मन्‍‍त्रीपरिषदको निर्णय
चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व विकास बैंकबाट प्राप्त हुने बीस अरब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने र त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले कुमारी, गणेश तथा भैरवको मासिक भत्तामा पचास प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको संञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले डडेलधुराको सुकुम्बासी बस्तीमा भएका रुखहरुले स्थानीय वस्तीलाई असर पुर्याएको भन्दै बस्ती छेउका १ सय २८ वटा रुख कटान गरी बिक्रि गर्ने र सो रकम राजश्वरमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ।
खर्च गर्न नसक्नेहरु नै पैसा माग्न मन्त्रालयमा लाइन लाग्छन् : अर्थमन्त्री महरा t
उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएकाहरु नै मन्त्रालयसँग पैसा माग्न लाइन लाग्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पुँजीगत खर्च नै अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले लक्षित योजनामा खर्च गर भनेर दिएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले लक्षित योजनामा खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गरिबी निवारण कोषको आगामी रणनितिमा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तक्रियालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म अपेक्षित आर्थिक विकासको अनुभूत गर्न नसकिने बताए। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिका महिला अझै बढी पीडीत रहेको भन्दै उनले दातृ निकायलाई त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न सुझावसमेत दिए। गरिबी निवारण कोषले देशका ५५ जिल्लाका २ हजार ९१ गाविसमा छरिएका ४ सय २५ सहकारी, १ हजार ६ सय ४५ महिला समूहमा काम गरिरहेको छ। यसमा २७ प्रतिशत दलित र ३० प्रतिशत जनजाति महिलाहरु छन्। आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा गरिबी निवारण कोषले वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने गरेको छ। कोषले ४० लाख जनसंख्या आफ्नो कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेको पनि दाबी गरेको छ।